Wikimedia Foundation elections/2021/Candidates/ig - Meta
Wikimedia Foundation elections/2021/Candidates/ig
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021/Candidates and the translation is 33% complete.
Ndị kọmịtịị nke nlekọta Wikimedia Foundation na-elekọta ọrụ Wikimedia Foundation.Ndị na-elekọta obodo na ndị nlekọta a họpụtara ahọpụta mejupụtara Kọmitii Ndị Nlekọta. Onye nlekọta ọ bụla na-eje ozi afọ atọ.
Obodo Wikimedia nwere ohere ịtụ vootu maka ndị nlekọta obodo. Mmadu ano ahọputara n’ime obodo a ga esonye na ndi nke nlekọta.Wikimedia bụ ije zuru ụwa ọnụ ma na-achọ ndị anamachọ si n'obodo sara mbara. Ndị anamachọ na-eme nke ọma n'eso usoro na ọrụ Wikimedia ma bụrụ ndị na-eche echiche, na-asọpụrụ, ma ndị obodo.Ndị kọmịtịị ga-achọ ịchọta echiche na olu ndị n'egosighi ha ma dị mkpa maka ngagharị anyị.
1 Tebụl Ndi Anamachọ
3 Ajụjụ Ndi Anamachọ
4 Nyochaa Ndị Anamachọ
Tebụl Ndi Anamachọ
Ndị kọmịtịị nke nlekọta tụlere nkà na ahụmịhe ha nwere na komịtịị nke nlekọta.Ndi anamachọ kwesiri imezụ usoro a di na akwụkwọ ndi anamachọ. Nke a bụ maka ebumnuche ozi naanị.Olileanya bu inwe ndi nlekọta isonye na ndi kọmịtịị ka ha mejuputa oghere na nkà na ahụmahụ ihe ha. Ozi banyere nkà ndị dị ugbu a na-abịa n'oge na-adịghị anya.
Ajụjụ Ndi Anamachọ
Ndị obodo nwere ike ịjụ ajụjụ n'oge nhọpụta. Kọmitii Nhọpụta ga-ekpokọta ajụjụ iji chịkọta ajụjụ ndị yiri ibe ya. Ndị anamachọ nwere ike ịza ajụjụ ndị ahụ na peeji wiki. Ndi anamachọ kwesiri azaa ajụjụ ndi a n'oge n'adighi anya iji nye ohere maka ntụghari.
Nyochaa Ndị Anamachọ
Kọmitii Nhọpụta ma ọ bụ ọrụ Wikimedia Foundation ga-enyocha ihe ndị achọrọ. Ndị ọrụ Wikimedia Foundation ga-enyocha njirimara na ihe ndị achọrọ na-anọghị n'ịntanetị.Aga enyocha ihe achọrọ nke wiki-base na njirimara dị na peeji a. A na-enyocha ihe ndị achọrọ na-anọghị n'ịntanetị ma emecha.
Ndị otu obodo nwere ike ịlele ngwa erughị eru na ngwa ewepụrụ n'afọ 2021.
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Foundation_elections/2021/Candidates/ig&oldid=21950893"